Tag: email collaboration | Martech Zone
Tag: email collaboration
inMotionNow, onye na - eweta usoro njikwa ọrụ maka ahịa na ndị otu okike, gosipụtara mmelite kachasị ọhụrụ na ngwaahịa ya, inMotion, gụnyere atụmatụ nyocha ọhụụ maka ozi ịntanetị ahịa na ọgbọ UX / UI na-esote. Ngwa nyocha email na-enyere ndị ọrụ aka ịhazi ozi ịntanetị site na ikpo okwu ahịa email ha nke ahọrọ ozugbo na InMotion maka nyocha na nnabata. Ndi ahia na ndi otu okike adighizi arapara n’inye na inata nzaghachi na mgbasa ozi email kariri ozi email. Kama, ha nwere ike
Ọ bụrụ na ị tọrọ atọ na ugwu email dị ka m, enwere ike inwe olile anya. Sendgine jikọtara ịdị mfe nke ojiji anyị na-atụ anya site na email yana ikike nhazi nke usoro njikwa ọrụ na-ewu ewu, na-enye ndị ọrụ usoro ntanetị nke nwere ihe niile ha chọrọ iji megharịa mmekọrịta na mmezu. Kama ijikwa ọrụ, Sendgine na-ewebata Tragbọ oloko nke echiche, ebe faịlụ, ozi, ihe omume na ihe aga-eme na-asọkọta ọnụ n'otu ebumnuche. Ikpo okwu na-enye ndị ọrụ ohere iweta nnukwu